Helping Siblings with Grief လက်ရှိစာမျက်နှာ
Gender can playarole in how people grieve. Men and women may process and express grief differently. Accepting differences can help family members give one another space to grieve in their own ways.
ကလေးတစ်ဦး၏ သေဆုံးမှုထက် ပို၍ စိတ်ထိခိုက်ခံစားရစေသည့်အရာဟူ၍ မရှိချေ။ အချို့သောနေ့ရက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းငယ် တိုးတက်မှုရှိသလို ခံစားရသည်။ အခြားသောနေ့ရက်များတွင်မူကား ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုးတက်မှုမရှိပဲ နောက်သို့ ပြန်ဆုတ်နေသည့်အတိုင်း ခံစားရနိုင်သည်။